DEEPIKA PADUKONE အမြင့်၊ အသက်၊ လင်ယောက်ျား၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး
Deepika Padukone အမြင့်၊ အသက်၊ လင်ယောက်ျား၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊
နာမည်ပြောင် (များ) Deepi, Deepz
လက်မအတွင်း ၅'၈ '
ပုံတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 34-26-34
အချစ် ကန်နာဒါ Aishwarya (2006)
ဘောလီဝုဒ်: Shanti အကြောင်း (၂၀၀၇)
ဟောလိဝုဒ် XXX - Xander ကေ့ဂ်ပြန်လာ (၂၀၁၇)
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ Filmfare ဆု
'အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးပွဲ ဦး ထွက်' Shanti အကြောင်း '(၂၀၀၈)
အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု” Goliyon Ki Raasleela: Ram-Leela '(2014)
အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု” ပီကူ '(2016)
နိုင်ငံတကာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ (IIFA) ဆု
အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု” ချင်နိုင်း Express '(2014)
မွေးနေ့5ဇန်နဝါရီ 1986
ခေတ် (၂၀၂၀ တွင်ကဲ့သို့) ၃၄ နှစ်
မွေးရပ်မြေ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဒိန်းမတ်
ဇာတိမြို့ Bengaluru, Karnataka, အိန္ဒိယ
ကျောင်း Sophia အထက်တန်းကျောင်း, ဘင်္ဂလား
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် တောင်ပေါ်ကရမေလတောင်ကောလိပ်, ဘင်္ဂလား
ဇာတ် ပုဏ္ဏား (Chitrapur Saraswat)
လိပ်စာ B / Cozihom, ပါaliိ Hill, Bandra (အနောက်), မွန်ဘိုင်း 400050
ဝါသနာ ကခုန်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ကစားခြင်း၊
Likes / မကြိုက်ဘူး Likes: mascara နှင့်အားကစားရုံ ၀ တ်ဆင်ရန်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရေစာများစားခြင်း၊ sarees, chudidaars ကဲ့သို့သောအိန္ဒိယအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်း
မနှစ်သက်: အနုတ်လက္ခဏာ, ဒီဇိုင်နာအဝတ်အစားဝတ်ဆင်
Tattoo (s) လည်ပင်းပေါ်တက်တူးထိုး
Anckle အပေါ်တစ် ဦး ကတက်တူးထိုး
အငြင်းပွားမှုများ • ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်တွင် Times of India က 'OMG: Deepika Padukone ၏ပြသမှုပြပွဲ' ဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက် Deepika သည်မသင့်လျော်သောခေါင်းစဉ်အတွက် TOI ၏တွစ်တာကို အခြေခံ၍ 'ဟုတ်တယ်၊ ငါမိန်းမပဲ။ ငါရင်သားရှိတယ် ကျွန်တော်မှာကွဲနေပါတယ် မင်းမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိလား။ ' အိန္ဒိယတိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကသတင်းနှင့်မင်းသမီး၏စိတ်ကိုခွဲခြားထားသည့်ဓာတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးနောက်သူမပရိသတ်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးဆောင်မှုနှစ်မျိုးလုံးထံမှထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့်တွစ်တာများကိုတွစ်တာမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။
• Ranbir Kapoor နှင့်သူမတွေ့ဆုံပြီးနောက် Ranbir သည်ကွန်ဒုံးအမှတ်တံဆိပ်ကိုထောက်ခံသင့်ကြောင်းလူကြိုက်များသော 'Koffee with Karan' စကားပြောခန်းတွင် Ranbir ကိုပါးစပ်ဖြင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။
• Ranveer Singh နှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက်အီတလီဆစ်ခ်အုပ်စုသည်သူတို့၏ဆစ်ဒီ - ပန်ဂျာဘီမင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆစ်ခ်ကျင့် ၀ တ်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
• ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင်သူမဟာ JNU ကျောင်းသားများအားရက်ရက်စက်စက်တိုက်ခိုက်မှုမှာကျောင်းသားများစွာဟာ JNU ရဲ့ဘော်ဒါဆောင်တိုက်ခိုက်မှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသခြင်းနှင့် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ JNU ကျောင်းသားများအပေါ်ရက်စက်စွာတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချသည်။ သူမ၏ရုပ်ရှင် Chhapaak ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် JNU တိုက်ခိုက်မှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းသူမ၏ဖော်ပြမှုကို Jawaharlal Nehru တက္ကသိုလ်မှဆန္ဒပြကျောင်းသားများထံသွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမက “ ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုငါစိတ်ဆိုးတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားမပြုလုပ်ရခြင်းမှာစိုးရိမ်စရာကိစ္စဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာများသည်တွစ်တာတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတင်သည့် hashtags 'boycottchhapaak' နှင့် 'IStandwithDeepika' နှင့်အနုတ်လက္ခဏာသာမကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများမှအပြုသဘောဆောင်သည့်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။  စီးပွားရေးလိုင်း
• ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၁ တွင် Deepika Padukone ၏အမည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သည် Sushant Singh က rajput မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဗျူရို (NCB) မှသေဆုံး အချို့သတင်းလိုင်းများကသူမသည် Bollywood ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာမှ WhatsApp chats တွင် အခြေခံ၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။ chats တွင် 'K' နှင့် 'D' သည် Sushant ၏ယခင်မန်နေဂျာ Jaya Saha နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုများကိုဆွေးနွေးနေကြသည်။ 'D' သည် 'K' မှ 'maal' ကိုတောင်း။ သူ၌ရှိကြောင်းပြန်ဖြေသော်လည်းသူသည်အိမ်၌ရှိသည်။ ထို့နောက်သူတို့ကစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်“ ပေါင်းပင်” ကိုမသုံးရန်သူမက“ hash” လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ [နှစ်ခု] Hindustan Times သတင်းစာ
ရေးရာ / ရည်းစား • Nihaar pandya (မင်းသား)
• Upen Patel (မင်းသား)
• မူဇာမီလ်အီဘရာဟင် (မင်းသား)
• Yuvraj Singh (ခရစ်ကက်)
• Siddharth Mallya (မင်းသား)
• Ranveer Singh က (မင်းသား)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် 14-15 နိုဝင်ဘာလ 2018
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရာဌာန ရေကန် Como, Lombardy, အီတလီ
ခင်ပွန်း / ဇနီး Ranveer Singh က (။ ။ ၂၀၁၈ - လက်ရှိ)
မိဘများ ဖခင် - Prakash Padukone (ယခင်အိန္ဒိယကြက်တောင်ကစားသမား)
အမေ - Ujjala padukone (ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်)
နှမ - Anisha Padukone (လူငယ်၊
အစားအစာ Ravioli Bolognese, ခေါက်ဆွဲ၊ Dal-Chawal၊ Biryani၊ Maharashtrian Varan၊ တောင်အိန္ဒိယအစားအစာ၊ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ၊ Dim Sum, Spaghetti, Pasta, Chocolate
သရုပ်ဆောင် (များ) Aamir Khan , Amitabh Bachchan , Shah Rukh Khan , Brad Pitt , ရစ်ချတ် Gere
မင်းသမီး Hema Malni , Sridevi , Dixit , Kajol
ရုပ်ရှင်များ) ဘောလီဝုဒ်: Dilwale Dulhania Le Jayenge
ဟောလိဝုဒ် Vicky Cristina ဘာစီလိုနာ၊ ပရဒိသုအရောင်၊ စင်ဒရဲလားလူ
အဆိုတော် (များ) A.R. Rahman , Rihanna , ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် , ဂျက်စတင်ဘီဘာ
အရောင် (များ) အဖြူ, Mauve
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ Anju Modi, Tarun Tahiliani, Manish Malhotra , Rohit Bal
အားလပ်ရက် ဦး တည်ရာများ ပြင်သစ်, မော်လ်ဒိုက်
အားကစား ကြက်တောင်, ဘောလုံး, ဝါးတားပိုလို
စားသောက်ဆိုင်များ •သံလွင်၊ မွန်ဘိုင်း
ကားများစုဆောင်းခြင်း Audi Q7, Audi A8, Mini Cooper, BMW 5-Series
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 14 Crore / ရုပ်ရှင် (2018 ခုနှစ်တွင်ကဲ့သို့)
ဝင်ငွေ (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့) ရူပီး 112,8 ကုreေ / တနှစ်  Forbes မဂ္ဂဇင်း
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ဒေါ်လာ ၂၀ သန်း
dashrath manjhi ဝီကီ
Deepika Padukone နှင့်ပတ်သက်သောလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Deepika Padukone သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
Deepika ကိုဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ Konkani မိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းသူမသည် ၁၁ လသားအရွယ်တွင်သူမ၏မိသားစုသည်ဘန်ဂလာရူသို့ပြန်လာခဲ့သည်။
Deepika Padukone ရဲ့ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ
သူမသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလူမှုရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် ခဲ့၍ သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။
သူမ၏ကြက်တောင်ပုံသဏ္ဌာန်ဖခင်ဖြစ်သောပရာကတ်ပဒူကွန်းအားဖြင့်သူသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ကြက်တောင်စောင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီး ၁၀ အဆင့်အထိပြည်နယ်အဆင့်ကြက်တောင်တေးကိုကစားခဲ့သည်။
Deepika Padukone သည်သူမ၏ဖခင်နှင့်အတူကြက်တောင်ရိုက်နေသည်
သူမဖြစ်ချင်တယ် ကြက်တောင်ကစားသမား သူမစိတ်ပြောင်းပြီးမော်ဒယ်လ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Deepika သည်သူမ ၁၇ နှစ်အရွယ်တွင်သူမ၏ပထမဆုံးသောလမ်းဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။
မော်ဒယ်လ်စဉ်အတွင်း Deepika Padukone
Deepika သည်“ တစ်နှစ်တာ၏မော်ဒယ် ၅ ကြိမ်မြောက် Kingfisher Fashion Awards ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်သူမနှင့်အတူထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည် ou yu maa! Liril လိမ္မော်ရောင်အတွက် 'ကြော်ငြာ။
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် Salman Khan က အဘယ်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးသူမ၏အခွက်တဆယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်သူမ၏ငါ့ကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရုပ်ရှင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းကသူမရုံသူမ၏မော်ဒယ်လ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်သူမသည်သီချင်းတွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ Naam hai tera ” မှ Himesh Reshammiya hit s hit album ‘ Aap kaa surroor ။ '
Mary kom ဘယ်ပြည်နယ်ပိုင်
သူမသည်သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုသင်ယူခဲ့သည် Anupam kher ‘s‘ မင်းသားပြင်ဆင်သည် ‘နှင့် Shiamak Davar မှကခုန်။
Deepika သည်သူမ၏ဘောလီးဝုဒ်တွင်ပွဲ ဦး ထွက်သရုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သော်လည်း Sanjay Leela Bhansali 's' 'Saawariya', Bhansali ကလုံခြုံကစားနှင့်ရွေးချယ်သည် Anil Kapoor 's သမီးရဲ့ပုံသေနည်းနှင့်အတူသူမ၏အစားထိုး Sonam Kapoor က ။
ဖာရာခန်း သူမ၏ရုပ်ရှင်အတွက်လက်မှတ်ထိုးရန် Deepika သို့ချဉ်းကပ်ခဲ့သည် ‘ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ် later သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုရုပ်ရှင်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် (နောက်ပိုင်းတွင် Deepika ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည့် ၂၀၁၄ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်) သည်နောက်ပိုင်းတွင်သူသည် Blockbuster ဖြစ်လာပြီးတစ်ညလုံးကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာသည့် 'Om Shanti Om' (2007) တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခံခဲ့ရသည်။ သတင်းများအရသူမသည်မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကူး (၂၀၁၄) ရုပ်ရှင်အတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ခဲ့သော်လည်းဖြစ်သည် Ankita lokhande ။  Koimoi
2008 ခုနှစ်တွင်သူမဖြစ်ခဲ့သည် နံပါတ် ၁ အဆင့် အိန္ဒိယ Maxim ရဲ့ '' Hot 100 '' စာရင်းထဲတွင်။
Deepika သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Hindustan Times ၏လူနေမှုဘဝပုံစံဖြည့်စွက် HT HT အတွက်အလွတ်စာရေးဆရာတစ် ဦး အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
'Chandni Chowk to China' (2009) ရုပ်ရှင်တွင် 'Suzy' အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူသည်ဂျပန်ကိုယ်ခံအနုပညာပုံစံ 'Jujutsu' ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးစတန့်အားလုံးအားဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
၂၀၁၀ တွင်သူသည်ရွာသားများအားရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သို့သောသာယာအဆင်ပြေမှုများရှိစေရန် Maharashtra ရှိ Ambegaon ရှိရွာတစ်ရွာကိုလက်ခံခဲ့သည်။
Deepika Padukone သည် Ambegaon ရှိရွာတစ်ရွာကိုမွေးစားခဲ့သည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူမကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အလှဆုံးအမျိုးသမီး People အိန္ဒိယမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေသောပြည်သူ့မဂ္ဂဇင်း၏။
Deepika တွင်သူမ Myntra တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော 'All About You' အဝတ်အစားတံဆိပ်ရှိသည်။
Deepika Padukone - မင်းအကြောင်းအားလုံး
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သူမကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ မတ်ေတာသ Laugh ဖောင်ဒေးရှင်းမှတိုက်ရိုက် prevent စိတ်ကျရောဂါကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်။
Deepika Padukone သည် Live Love Laugh ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်
သူမသည် in အတွက်အခန်းကဏ္ offered ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်7‘(2015), သို့သော်သူမသည်အခြားကတိကဝတ်များကြောင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Sanjay Leela Bhansali ၏ success အောင်မြင်မှုအပြီးတွင်သူသည်ဘောလီးဝုဒ်၏အမြင့်ဆုံးပေးချေမှုရှိသောမင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Bajirao mastani ။ '
အောက်တိုဘာလ 2019 ခုနှစ်တွင်သူမသူမ၏ Instagram ကိုအပေါ်သူမ၏ဆရာရဲ့မှတ်ချက်တွေ shared ။ သူမ၏ဆရာ၏မှတ်ချက်များအရသူမသည်စာသင်ခန်းတွင်အလွန်စကားပြောတတ်သူဖြစ်သည်။
Deepika Padukone ရဲ့ဆရာရဲ့မှတ်ချက်
Deepika နှင့် Ranveer တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင် ၄ င်းတို့ကိုကြိုးမချည်ခင်လေးနှစ်စေ့စပ်ခဲ့သည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Deepika Padukone နှင့် Ranveer Singh တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ရန်။
ဟိန္ဒူဟုခေါ်ဝေါ်သော mahesh babu ရုပ်ရှင်ကားများ
Isha Ambani Anand piramal အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်
nandini Chatterjee နှင့် abir Chatterjee
bhabhi ji ghar တန်းတူ hai အပြည့်အဝသွန်း
ss rajamouli အားလုံးရုပ်ရှင်အမည်များ